Izoqala eThekwini inhlolokhono yama Idols SA
AMAJAJI ohlelo ama-Idols SA nakulo nyaka azothola usizo kubaculi abahlukene abazohambisana nabo emadolobheni ahlukene njengoba kuleli sonto inhlokhono yalo nyaka iza eThekwini kule mpelasonto Isithombe: SIGCINIWE
NOKUBONGWA PHENYANE | February 8, 2019
KUZOBONAKALA ubuso bosaziwayo bakuleli abanesandla emculweni abanye abangabaculi, ohlwini lwamajaji oluzothungatha amakhono entsheni yasemadolobheni ahlukene njengoba inhlolokhono yohlelo ama-Idols SA, iza eThekwini kusasa.
UGavin Wratten, ongumqondisi nomdidiyeli walolu hlelo uthe sebekubheke ngabomvu ukuza kulesi sifundazwe abanganavalo ukuthi bazobuya nenqwaba yethalente.
“Nakulo nyaka nakanjani sizoba nabo osaziwayo abazobonakala besiza amajaji amathathu alolu hlelo nakulo nyaka okusewuSomizi Mhlongo, Unathi Nkayi no-Randal Abrahams,” kusho uGavin.
Uthe okwamanje ngeke basho ukuthi angobani lamajaji kodwa maduzane bazowamemezela njengoba kukhona abasakulungisa nabo.
“Silinde ukulungisa okuncane nabo bese siyabamemezela emphakathini. Ijaji lokuqala lizobonakala eThekwini. Ezindaweni esisazihambele okuyiBloemfontein nePitoli besenza inhlolokhono eyaziwa ngePop Up lapho becula khona emotweni kungekho jaji phambi kwabo,” kuchaza yena.
UGavin ube esenxusa intsha yaseThekwini ukuthi iphume ngobuningi ize eNorth Beach, e-Amphitheatre izokhombisa ngekhono layo.
“Abazobe bezozama inhlanhla abazilungiselele ngakho konke njengoba silokhu siqhubekile nokufuna into esezingeni. Ngonyaka odlule akekho ongabonanga ukuthi ithalente beliphezulu kanjani, ngakho silindele okukhulu kunalokho nakulo nyaka,” kuchaza yena.
Ngonyaka odlule abaculi ababa yingxenye yalolu hlelo uMusa Sukwene, Rebecca Malope, Dr Malinga noDJ Cleo.